Imicro-Inverter encinci, iSolar Kit, iPhaneli yeSola-iNtloko
I-Apex Solar ngumnikezeli weemveliso ze-photovoltaic ezinesakhono sokudibanisa imveliso. Iimveliso ze-photovoltaic ze-Kuigu Technology zithunyelwe kumazwe angaphezulu kwama-20 afana ne-United States, Germany, United Kingdom, Brazil, South Africa njalo njalo. Ukuthunyelwa ngokupheleleyo kuye kwafika kwi-2GW, isenza ukuba ibe lilanga elithandwayo kubathengi abaninzi.
I-Apex Solar iye yazisa izixhobo zemveliso ezenzekelayo ezenzekelayo ukuvelisa iipaneli zelanga ezinokuthenjwa kubo bonke abathengi, amandla emveliso aya kufikelelwa kwi-1GW kunyaka olandelayo Kukho inkqubo ye-QC ebanzi ecinga ukuqala kude kube sekupheleni. Zonke izinto ezisetyenzisiweyo ezisetyenzisiweyo zivela kubanikezeli beNqanaba 1, zisa iimveliso ezisemgangathweni ezifanayo negama labavelisi bemodyuli yelanga eTshayina ngexabiso elinokhuphiswano ngakumbi.
Inkcazo yemveliso uthotho lwepaneli yelanga eyenziwe nge-210mm iiseli zelanga, nge-MBB ...
Inkcazo yeMveliso uthotho lwepaneli yelanga eyenziwe nge-210mm iiseli zelanga, nge-MBB kunye nesiqingatha ...
I-MONO 585-605W 120cells 12 M12 / 210mm）
210mm 110iiseli 555W
Usebenzisa i-M12 (210mm) yecandelo le-wafer kunye ne-MBB, ukuphucula amandla ngakumbi Ukusebenza kunokufumana ama-21% ngaphezulu nge-1/3-cut cut cells, i-1/3-cut-cell technology yenza amandla aphezulu kunye neqondo lobushushu elisezantsi
210mm 132iiseli ezingama-660w
Sebenzisa i-M12 (210mm) yecandelo le-wafer kunye ne-MBB, ngakumbi ukuphucula amandla
Ukusebenza ngokufanelekileyo kunokufumana i-21% ngaphezulu
Ngeeseli ezisikiweyo eziyi-132 zeeseli, itekhnoloji enqamleze iiseli yetekhnoloji yenza amandla aphezulu kunye neqondo lokushisa elisezantsi
Imveliso eNtsha ...
Iziseko zeMveliso eNtsha zakhiwa kwisiXeko saseYangzhou, kwiPhondo laseJiangsu, China, zigubungela indawo engama-25000m2. Imveliso entsha ayivelisi kuphela amandla elanga aphezulu ...
Inkqubo yelanga kunye ne-EPC Instal ...
Inkqubo yeSolar kunye noQeqesho lokuFakelwa kwe-EPC Ukwenza inkonzo ebhetele kubathengi bethu, i-Apex arra ...
182mm Solar Imodyuli Solar Sy ...
Kutheni iPhaneli yeSola eneSeli eziSikwa ngesiqingatha seLanga ithandwa kangaka？ Apex Solar productio ...